Imbiky Herilaza : Hisy korontana ny fampielezan-kevitra ….. -
AccueilSongandinaImbiky Herilaza : Hisy korontana ny fampielezan-kevitra …..
Imbiky Herilaza : Hisy korontana ny fampielezan-kevitra …..
Gazety TRIATRA : Amin’ ny maha mpahay lalàna sy mpanara-maso ny fiainam-pirenena anao. Ahoana ny fahitanao ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra ?
Imbiky Herilaza : Raha ny fahitako ny ho fiantombohan’ny fampielezan-kevitra amin’ny daty ofisialy dia toa izao. Eo aloha ny mahakasika ireo candida, izay efa niantomboka mialohan’ny fotoana. Izy ireo dia hanohy ny fitsidiham-paritra amin’izay mbola tsy vita teo aloha. Hilaza mibaribary ny hevitra sy programa ary vina @amin’ny maha kandidà azy. Eo kosa ireo candida, izay mbola vao hanomboka ny fampielezan-kevitra, ary izy ireo dia kandidà salasalany na madinika. Noho izany dia mety any amin’ny renivohi-paritany izy, sy any amin’ny toerana be mpifidy no tena hitsidika sy hiasa.
Gazety TRIATRA: Hitovy ve izany ny herijika amin’ ny fitaovana ampiasaina, tahaka ny serasera?
Imbiky Herilaza : Ho betsaka ny fampiasana ny tambanjotran-tserasera, satria mora ampiasaina ary be mpanaraka. Eo ihany koa ny hainoamanjery maro samihafa sy gazety an-tsoratra. Fa kosa dia tokony ho malina sy handray ny andraikitra tandrify azy ny rafitra mifehy ny fifidianana, ireo rafim-panjakana mahakasika ny filaminana sy ny haino amanjery io.
Gazety TRIATRA : Mety hisy korontana ve izany ?
Imbiky Herilaza : Eo no ilana ny fanaraha-maso, satria mety hisy ny fifandonana. Ny herisetra ara-pifidianana, na “violences “ dia mety ho am-bava na hoe verbales, na physiques, na mihatra aman’aina, na ara-panahy, na morales, na ara-materialy. Eo koa no manomboka ny fahefan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, mikasika ny fifidianana raha toa ka misy ny fandikana ny lalàna mifehy ny fifidianana.
Gazety TRIATRA : Misy fepetra tokony horaisina ve izany, dia inona avy ?
Imbiky Herilaza : Ny fandraisan’andraikitra hentitra, haingana ary tsy mitanila avy amin’ ireo manam-pahefana manoloana ny mety ho fifandrangitana sy fihantsiana samihafa dia ilaina tokoa. Eo koa ny adidy mitambesatra amin’ireo raiamandreny am-panahy sy ara-drazana ny amin’ny fananarana sy ny fisorohana. Ny fanasaziana avy amin’ny HCC, ny Fitsarana raha toa ka ilaina izany. Anjaran’ny kandidà ihany koa no mifehy ny mpanara-dia azy ireo, mba tsy hihoa-pefy.
Gazety TRIATRA : Hitovy ve ny herijika, mandritra ny fampielezan-kevitra?
Lava be ilay iray volana. Ny kandidà matanjaka no haharitra hatramin’ny farany. Tsy mifandanja hatreto ny kandidà noho ny resaka fananam-bola.